Tọghata gị Android ka ẹbọ nke Apple iPhone 6 | Gam akporosis
Paul Aparicio | | Ngwa gam akporo, Nkuzi
Ọ bụrụ n ’ọ bụla post a ka m na - achị ọchị maka ya, ya atụla gị n’anya. Ejiri Android n'echiche nke ịbụ sistemụ arụmọrụ mepere emepe nke na-enye gị ohere ịme ihe ọ bụla. Otu n'ime ihe ndị ahụ bụ ịgbanwe ihe oyiyi nke njirimara onye ọrụ yana ọtụtụ ndị ọrụ nwere mmasị (ihe m na-aghọtaghị) inye gị Gam akporo ọdịdị nke iPhone. N'ebe a, anyị ga-egosi gị otu esi eme ya.
N'ọtụtụ oge, iji gbanwee onyonyo nke gam akporo anyị ọ bara uru itinye nke ọhụrụ obubata. Ọ bụrụ na ịmaghị ihe m na-ekwu, n'ezie ị ghọtara ma ọ bụrụ na m gwa gị na ọ bụ ụzọ eji akpọ gam akporo Gburugburu, Gburugburu ma ọ bụ Skins (na enweghị ike gbanwee ya na iPhone ma ọ bụrụ na ọ bụghị ya jailbreak) . Ruo oge na-adịbeghị anya enwere otu akpọrọ iOS 8 Launcher HD Retina Theme nke ọtụtụ ndị ọrụ masịrị, mana na nkwụnye ahụ adịkwaghị na Google Play na, na mgbakwunye, ụdị iOS kachasị ọhụrụ adịlarị iOS 9. Lee ndị ọhụrụ ndị ọzọ (ọ bụ ezie na ị ga-achọta ihe na ngwa ngwa).
1 Isiokwu IPhone maka gam akporo
1.1 OS9 Launcher HD-Lisa na Okwu
1.2 iOS 9 obubata
1.3 IOS 9 Mkpọchi ihuenyo
1.4 IOS 9 na akwụkwọ ahụ aja
2 Enwere m ike iji ngwa iPhone na gam akporo?
Isiokwu IPhone maka gam akporo
OS9 Launcher HD-Lisa na Okwu
Atụla egwu site na aha ahụ. Ọ bụ abughi OS9 (nsụgharị Mac tupu OS X, nke izizi batara na 2002) ma ọ bụ mee ya na Apple Lisa (kọmputa ewepụtara na 1978). Ihe ndozi a ezughi oke, mana ọ na-enye ọtụtụ n'ime ya atụmatụ ndị dị na iOS 9, dị ka:
Ndenye aka. Ọ bụ ezie na ọ nweghị otu onyonyo ahụ dị ka nhọrọ 3D Touch, ọ bụkwa eziokwu na ọ chọghị ya. Ntinye aka ngwa ngwa bụ egwuregwu dị n'etiti ụzọ mkpirisi na 3D Touch ma nye anyị ohere ịnweta ụfọdụ ọrụ site na ihuenyo ụlọ. Kedu ihe nwere ike ịhapụ anyị, dịka ọmụmaatụ ma ọ bụrụ na ngwa ahụ dakọtara, tinye ihe mejupụtara nke tweet site na otu ihuenyo ụlọ.
Mpempe akwụkwọ na otu ihe oyiyi dị ka iOS 9, nke bụ square na mechie n'ọnụ ya na 9 ngwa n'ime. Nke a bụ ihe kemgbe ikpe kemgbe iOS 7.
Ndenye ọchụchọ. Malite na iOS 9, Chakwasa ihie na iOS 9 ka edegharịrị naanị ".chọ." Site na "Chọọ" ị nwere ike ịchọ ihe ọ bụla na iphone ma ọ bụ mee nchọta n'ịntanetị, ihe nke Launcher a na-enyekwa anyị ohere ịme.
Nhọrọ maka zoo ngwa. Nke a bụ nhọrọ nke nwere ike ịdị na iOS 10, yabụ na Launcher ahụ tụrụ anya ha ma mee ka anyị zoo ngwa. Site n'ụzọ, na-enweghị iji iTunes, dịka o yiri ka ọ ga-adị mkpa na iOS 10 (ọ bụrụhaala na ha ekwe ya, ịmara Apple ...).
iOS 9 obubata
Mfe ma dị mfe icheta aha, nri? IOS 9 Laucher bụ naanị nke ahụ, isiokwu na-anwa inye iOS 9 anya. Ọ na-enye ihe ndị a (ewepụtara na Google Play):
Dị Mfe, ìhè na ngwa ngwa.
Ọcha, ewepụghị, polished home ihuenyo nnọchi.
Ndị egwu Smart: Ngosipụta dijitalụ, njikwa Kalịnda, gosipụtara ụbọchị na oge ugbu a n'ụzọ dị egwu.
Ngosipụta ntụgharị ngwangwa na ire ụtọ. Ọ naghị anọ ọbụna na gam akporo kacha ochie na nwayọ nwayọ.
Iku HD Retina Ngosiputa na akwụkwọ ahụ aja nke gị onwe gị.
Oru oma batrị management gụnyere ngosi toggle agbam ume nhọrọ.
Mee ka ngosi dị mfe iji rụọ ọrụ: Wi-Fi, GPS, tọọchị, data mkpanaka na ndị ọzọ.
Dezie Ọnọdụ Animation Mmetụta: Shake, Miri, Molekul
Ọ nwere ọtụtụ nhọrọ, ọ dịghị onye na-agọnarị nke ahụ, ha na-ekwudị na ọ bụ ihe kachasị mma nke Google Play iji iOSomie iOS 9, mana m ga-adọ aka na ntị na Launcher a na-ebelata arụmọrụ Gam akporo (ma ọ bụrụ na ... na Launchers na ihe oyiyi ọzọ e ...).
IOS 9 Mkpọchi ihuenyo
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị inwe otu ihuchi mkpọchi Karịa iOS 9, iOS 9 Lockscreen bụ otu n’ime nhọrọ kacha mma. Dị ka aha ya na-egosi, mgbanwe a anaghị eme ihe ọ bụla karịa ịgbanwe mkpọchi mkpọchi nke gam akporo anyị iji emomie nke iOS 9, nke gụnyere na mgbe ị na-enyo ihuenyo ahụ gaa n'aka nri, anyị ga-ahụ ọnụọgụ ọnụọgụ iji tinye koodu anyị na nọmba n'ime bọtịnụ gburugburu.
IOS 9 na akwụkwọ ahụ aja
Ọ bụrụ na ihe ịchọrọ bụ naanị fondos de pantalla, na ndepụta ndị a ị nwere akwụkwọ ahụ aja niile nke iOS 9 (ọ bụ ezie na enweghị m mmasị na nke ọ bụla n'ime ha):
Ọchịchịrị gbara 2
Agba gbawara 2
Agba gbawara 3
Blue odida obodo
Wave (nke mbụ nke iOS 9)
Budata iOS 9 na akwụkwọ ahụ aja
Enwere m ike iji ngwa iPhone na gam akporo?
Nke a bụ ajụjụ ọtụtụ ndị ọrụ nwere, mana na ị gaghị: Android bụ sistemụ arụmọrụ yana iOS bụ sistemụ arụmọrụ dị iche iche. Ọ gwụla ma ị bụ ezigbo ndị mmepe (usoro hacker), ngwa nke otu sistemụ arụmọrụ nwere ike iji ya na onye ọzọ site na iulationomi, yabụ mba ha enweghị ike jiri ngwa iOS na gam akporo. Site OS X Xcode, ị nwere ike i emomi iOS, mana ịkwesịrị inwe ụfọdụ ihe ọmụma.
Lee ajụjụ a bụ: Gịnị kpatara anyị ji eji ngwa iOS na gam akporo? Ọ bụ eziokwu na sistemụ arụmọrụ ọ bụla nwere ngwa nke dị naanị site na sistemụ arụmọrụ a, mana na gam akporo anyị nwere ngwa maka ihe niile. Dịka ọmụmaatụ, Tweetbot adịghị, mana Tweetcaster ma ọ bụ Plume dị. Na mgbakwunye, Apple amalitela iwebata ụfọdụ ngwa ya na Google Play, dị ka Apple Music, ya mere na anyi ekwesighi iche banyere ngwa iOS maka gam akporo.
You jisiri ike nye gam akporo gị ụdị nke iOS? Ọ bụrụ otu a, egbula oge ịgwa anyị etu i si mee ya na ihe i jirila.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » -Esi mee ka gị gam akporo dị ka Apple si iPhone 6
Maka gịnị? Hahaha ekele!
Zaghachi Luis Núñez Martí
Ọ dị mma, mana ọ kwesịrị itinye ogwe ngosi elu dị ka ios, yana na akara ngosi ahụ pere mpe ma nwekwa otu ahịrị ọzọ.
Naanị mmanya ahụ na-efu
Typedị ọkwa ụdị ios peri ngwa ahụ dị mma
Kedụ ka m ga-esi budata ya?
Onwere ngwa ana akpo CleanUI nke nwere ihe di ka ios, amaghi m ma inuru ma obu hu ya. Ọ gụnyere theming na ntọala, ogwe ngosi na mkpọchi mkpọchi.
Ngwa ahụ adịkwaghị
budata Inoty na ụlọ ahịa
Zaghachi Alejandra Guzman
Andréa sevilla dijo
whatsapp na aputa dika na iphone?
Zaghachi andrea sevilla
Oke Osimiri na elu-igwe dijo
Enwere ike onye gwa m ihe kpatara na ọ jigideghị na huawei? Enwere m nsogbu ahụ ebudatara mana nhọrọ nke ebighi ebi apụtaghị, ọ na-enyere xfa aka
Zaghachi Mary Heaven
Onwere n'ime ha gụnyere keyboard na emojis?